पैसा नपुग्दा मुलुकभर ९ सय पुल अलपत्र « Janata Samachar
पैसा नपुग्दा मुलुकभर ९ सय पुल अलपत्र
प्रकाशित मिति : 13 January, 2018 4:48 pm
काठमाडौं । मुलुकभर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका ९ सय ११ वटा पुल बजेट अभावले सम्पन्न हुन नसकेर अलपत्र परेको छ । निर्माण ठेक्का संझौता अनुसार रकम विनियोन नहुँदा पुलमा समस्या आएको हो ।
सडक विभाग पुल महाशाखाका अनुसार मुलुकभरका पुल निर्माणको लागि करिब ६२ अर्बको ठेक्का लगाइएको छ तर सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा त्यसको लागि ३ अर्ब रुपैयाँ मात्र छुट्याएको छ ।
विभागका उपमहानिर्देशक एवं पुल माहाशाखाका प्रमुख अर्जुनजंग थापाले पुल निर्माणको लागि रकम अत्यन्तै कम विनियोजन हुँदा समस्या आएको बताए । ‘पुल निर्माणको लागि वर्षेनी कम्तीमा १६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ’ उनले भने, ‘तर यस वर्ष बजेट अत्यन्तै कम आएको छ ।’
प्रमुख थापाका अनुसार राजमार्गमा मात्र २ सय ७६ वटा पुल निर्माण भइरहेको छ । त्यसको लागत १५ अर्ब रुपेैयाँ छ । ५० वटा पुल यसै वर्ष निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा छन् । ठेक्का सम्झौताअनुसार तीनदेखि चार वर्षमा सबै पुल निर्माण गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । पुल निर्माण सम्पन्न गरेका व्यवसायीहरु भुक्तानीको लागि दिनहुँ महाशाखा धाउने गरेता पनि रकम नहुँदा हिसाब चुक्ता गर्न नसकिएको थापाले सुनाए ।
महाशाखाका अनुसार मुलुकमा अहिले २ हजार ९ वटा पुल निर्माणधीन अवस्थामा छन्। नयाँ निर्माण भएका सडकमा मात्र ५ सय पुल बनाउनु पर्ने अवस्था छ। पुल निर्माणमा नेपाल सरकारको भारतीय, चीन, एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंक लगायतको सहयोग गर्दै आएका छन् ।
आजदेखि ७ सय ५३ स्थानीय तहमा रोजगार खुल्दै (सूचनासहित)
काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संञ्चालनका लागि शुक्रबारदेखि रोजगार संयोजक भर्ना प्रक्रिया शुरु गरिने
रिद्धि सिद्धि ओ.पि.सि सिमेन्ट बजारमा आउँदै
काठमाडौं । शंकर ग्रुप र अम्बे ग्रुपको संयुक्त लगानीमा हेटौडाको रातोमाटो बाट रिद्धि सिद्धि ओ.पि.सि
काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्रयोग गरिरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पोल र फाइबरको भाडादर वृद्धि लागू
डा. केसीलाई राति नै काठमाडौं ल्याइयो,…
काठमाडौं । इलाममा २५ पुसदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बनेपछि काठमाडौं ल्याइएको छ । डा. केसीको मुटुमा…
प्रतिनिधि सभामा सांसदका प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिँदै (LIVE)
‘फागुन ३ भित्र कर्मचारी समायोजन सम्पन्न हुन्छ’ (भिडियोसहित)
‘सबैको राज्य भएको अनुभूति अझै हुन सकेन’
आमा तिम्रो ममताको संघारमा छु स्वाभिमान झुक्न दिन्नँ
हेर्दै जाऊ शरीर यो आगोमा हुनेछ
आफ्नै औँठाले चुनिएको बेइमान सरकार